magaalada Cadaado waxaa ka dhacay dibad bax looga soo horjeeda al-shabaab(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xarunta wadahadalka bulshada Soomaaliyeed ee CCD, ayaa gacan ka geysatay qabanqaabada Dibadbaxan kadhanka ah kooxda Al-shabaab ee shacabka Gobolada Dhexe ay ka dhigeen magaalada Cadaado ee Gobolka Galagduud.
Dibadbaxa ayaa waxaa ka qeybgalay masuuliyiin ka mid ah Dowlada Goboleedka Galmudug oo isugu jirtay Wasiiro, Xildhibaano ka tirsan Dowlad gobaleedka Galmudug, Taliyaha Guutada 21- aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Taliyaha ciidamada booliska degmada Cadaado,masuuliyiin ka tirsan maamulka Degmada Cadaado, waxgaradka Degmada, Ururka Haweenka, Ururka Dhallinyarada, iyo Dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid 6-da Xaafadood ee Magalada Cadaado.
Dibad baxayaasha oo watay Boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo kala duwan oo ka dhan ah Al-shabab ayaa Socdaal dheer kusoo maray qeybo ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magalada Cadaado,kuwaasoo isugu soo Ururay Xarunta degmada Cadaado.
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Degmada Cadaado Nuur Yarow Xeyle oo ugu horeyn la hadlay dadweynaha isku soo baxay ayaa waxaa uu kawarbixiyay ujeedka Dibad baxa iyo sababta keentay.
“Ujeedka aan isugu nimid halkaan waa banaanbax nabadeed oo aan ku taageerayno Ciidamadeena,waxa nabadda diidana aan uga hortagno,Madooneyno nabadiid,madooneyno nabad la’aan,waxan taageeraynaa Galmudug,Cidkasta ee rabta bulshadan inay lugaha ku dhagto oo horay iyo gadaal u diido oo horumarkeeda diidaan cidna ka yeeli meyno mana ogalaaneyno”ayuu yiri Gudoomiye ku-xigeenka.
Abaanduulka Qeybta 21 aad ee ciidanka Xooga dalka Gashanle Sare C/laahi Aadan Cisman Ciro oo halkaasi dibad baxayaasha kula hadlay ayaa waxa uu sheegay in guulaha ay gaareen ay ku gaareen taageerada shacabka Soomaaliyeed.
“Waxan u hambalyayneeynaa Ciidamada Galmudug iyo kuwa xooga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgala Galmudug guulaha ay ka gaareen Cadowga Umadda Soomaliyeed ee UGUS,Waxaana rajeynaynaa wanaaga ay gaareen hadaan shacabka garabsiin inaaney gaareen waxayna kalsoonidaas ka heleen shacabkooda idinkana waan idinkaga mahad celinaynaa”ayuu yiri Taliye Cirro.
Xildhibaanad Maryan Cali Abti doon oo ka mid ah xildhibanada Galmudug oo hadal kooban ka jeedisay dibad baxa ayaa waxay ciidamada ugu hambalyeysay guulaha ay ka gaareen Kooxda Al-shabaab.
“Waxan Rabaa halkaan inaan ka taageero Dagaalkii ba’naa ee faraha loo gubtay ee ka dhacay deegaanka Camaara guushii ay ka gaareen Ciidamadeena Galmudug,waxan leeyahay jira oo jooga,cadow kastana waxan diyaar u nahay haween iyo ragba inan iska difaacno”.
Wasiiru dowladha wasarada arinimaha gudaha dowlad gobaleedka Galmudug Cumar Guureeye oo isna dibad baxayaasha la hadlay ayaa waxa uu balan qaaday in ay la wareegi doonaan deeganada fara ku tiriska ah ee ay wali ku sugan yihiin haraadiga Al-shabab.
“Sida runta ah Ciidamada Galmudug waxay soo hoyeen guul taariiqi ah ka dib markii degmooyin iyo magaalooyin ka tirsan galmudug oo horay aan ugu sugnayn kooxahaas qaswadayaasha ah ay kusoo xad gudbeen oo ay kusoo duuleen sida kartida iyo qiimaha leh oo ay uga sifeeyeen dibna ay ugu soo celiyeen gacanta dowlada.Waxan rajeynaynaa inay deegaanadaGalmudug ay dib u heli doonaan dhamaan deegaanada dhiman”.
Wasiirka dhalinyarada iyo sportiga Galmudug Warsame Maxamed Xasan “Warsame joodax”oo gaba gabadii dibad baxa qudbad dardaaran ah ka jeediyay ayaa waxa uu kooxda waqtigooda sii dhamaanayo ee Al-shabaab ugu baaqay in dhibaatada ay ka daayaan Shacabka Soomaaliyeed.
“Waxan kula talinaynaa Al-shabab waqtigiina waa dhamaaday umadda intaad lug goyn karteen waad lug gooyseen umadda horumar iyo nolol ayay rabtaa dhibkii aad horay ugu hayseen loo dulqaadan maayo waa mida maamul iyo masuuliyad loo dhisay insha’allah hadii alle idmo intii hore ha idinkugu ekaato ka daaya umadda dhibka iyo madaxgooyada aad la barateen”.
Dibad baxani ka dhacay magalada Cadaaado ayaa waxa uu ka dambeeyay ka dib markii dhawan ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa dowlad Gobaleedka Galmudug ay dib ula wareegeen deegaanka Camaara waxana dibad baxani taageerada ah uu qeyb ka yahay dhiiri gelinta ciidamada howlgalada ay ku baacsanayaan haraadiga kooxda Al-shabaab.